Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » I-WTN » Ukuphuhlisa ubuNkokheli beQela ngamaxesha angaqinisekanga
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • I-WTN
Yonke imiba yohambo kunye nokhenketho, kwicandelo labucala nakwicandelo likarhulumente, bafundile ukuba kwimarike yanamhlanje engazinzanga; uluntu kunye nezizwe zonke kufuneka zisebenzisane ukuze kulungelwe abantu bonke.
UGqr. Peter Tarlow, umongameli weWorld Tourism Network, kunye nomseki weTourism Titbits wabhala eli bali libalulekileyo kubunkokeli beqela ngamaxesha e-COVID-19.
Amaxesha amaninzi iingcali kwezokhenketho zithetha “ngobudlelwane kunye nobunkokeli beqela”, kodwa ngelishwa uninzi lwabo luthetha ukuthini ngeli binzana: “makhe sibone ukuba ungandenzela ntoni na.”
Ukhenketho olugxile kwi-Arhente, nangona kunjalo, ngeli xesha lentlekele enxulumene nemozulu, iimfazwe, isiphithiphithi sezopolitiko kunye nobhubhane kuya kuba nzima ngakumbi ukulawula ngempumelelo.
Uluntu kwanezizwe ziphela kufuneka zisebenzisane ukuze kulungelwe abantu bonke.
Ukukunceda ufezekise eli nqanaba lentsebenziswano yentengiso kunye nempumelelo qwalasela ezinye zezi ngcamango zilandelayo:
· Bajonge abantu osebenza nabo njengabalinganayo kunokuba babe ngabantu ekufuneka ubanyamezele. Ngamaxesha amaninzi siye sithande ukujonga oogxa bethu kwezokhenketho kuphela ngesiseko seshishini lethu. Akukho shishini lokhenketho; kunokuba ukuhamba kunye nokhenketho yinkqubo ephilayo yamalungu amaninzi aphilayo asebenza kunye kakhulu ngendlela efanayo nomzimba womntu. Ukuba naliphi na ilungu liyasilela, yonke inkqubo inoxanduva lokuva impembelelo.
· Khulisa intlonipho nokuthembana phakathi kwenu. Kubalulekile ukuba kubekho injongo yokhenketho efanayo eqhutywa kwinkqubo enye. Nangona abantu abohlukeneyo benezakhono ezahlukeneyo kunye namanqanaba okukwazi, eyona nto iphambili kukuba ukufikelela kwiinjongo ngumsebenzi womntu wonke. Amagosa ezoKhenketho kufuneka akhumbule ukuba akwimeko yobungcali, akuyomfuneko ukuba abe ngabahlobo bobuqu babalingane babo, kodwa kufuneka aphuhlise ubudlelwane obuhle bokusebenza.
· Musa ukoyika ukuhamba namathumbu akho. Kukho amaxesha apho kungakhathaliseki ukuba ulwazi lubonakala luthetha ntoni amathumbu akho akuxelela ukuba esi ayisosigqibo esichanekileyo. Amaxesha amaninzi intuition inokudlala indima ebalulekileyo ekwenzeni izigqibo. Ngelixa singaze sifune ukuyihoya idatha, ungahoyi iimvakalelo zakho zamathumbu.
· Zama ukuphuhlisa amava afanayo ngokuchitha ixesha noogxa bakho. Amaxesha amaninzi, sibagweba ngokungafanelekanga abanye kuba sicinga ukuba siyaliqonda ishishini lomnye umntu. Ayingombono umbi ukuba abalawuli beCVB bachithe ixesha elincinci besebenza ngaphakathi kweehotele, iiresityu, kunye nezinto ezinomtsalane ukuze baqonde ngokwembono yokuqala ukuba yintoni imingeni kunye namathuba. Ngendlela efanayo, abaninizihotele abasenokugxeka imigudu yentengiso yesixeko basenokuchitha usuku ngonyaka kwi-CVB okanye kwiofisi yabakhenkethi ukuze bafunde ibali elingaphakathi ngokuphathelele ukuthengiswa kwendawo yonke okanye ngokuphambeneyo.
· Phuhlisa umlo omanyeneyo. Nokuba zeziphi iingxoxo zangaphakathi kumbutho wakho, kufuneka zihlale ngaphakathi ngokungqongqo. Kuyingozi kakhulu kwishishini lezokhenketho xa iingxoxo zalo zangaphakathi zenziwe esidlangalaleni okanye zivuzwe kumaphephandaba. Into eyenzekayo ngaphakathi kumagumbi ebhodi kufuneka ihlale kwigumbi lebhodi. Fundisa abantu kushishino ukuba uxanduva luvelisa uxanduva olutsha kwaye kunzima kakhulu (kunye nobuchwephesha obungaphezulu) ukusebenzela ukugcina iqela likunye kunokulikrazula.
· Fundisanani. Yiya kwezinye iindawo uthathe amanqaku, emva koko wabelane nabanye osebenza nabo ngento oyifundileyo. Uluntu lwakho akufuneki lube lolokuqala ngengcamango entsha, kodwa kunokuba lufunde kwabanye kwaye lufezekise izimvo zalo. Thatha izinto ezibalulekileyo kwingcamango nganye kwaye ulungelelanise iingcamango kwimeko yakho ethile.
· Phuhlisa inkqubo yomcebisi. Ukhenketho yinkalo enzima kangangokuba sonke sifuna abacebisi. Abacebisi kufuneka babe ngaphezu kootitshala. Abacebisi kufuneka ibe ngabantu abasinyanzelayo ukuba sibone umfanekiso omkhulu kunye nokuba icandelo ngalinye lokhenketho lidibana njani. Abacebisi abalungileyo kufuneka basebenze umntu ngamnye kuthi njengee-arhente zothungelwano ezinokusazisa kubantu abangaphandle kwamashishini ethu. Kwishishini apho abathengi bahlala bengasixeleli izikhalazo zabo zokwenyani kwaye bangabuyi nje, onke amagosa ezokhenketho afuna abacebisi abanokusebenza njengabayimfihlo, abahleli bokulindela, abahloli bokwenyani kwaye kwangaxeshanye babancede ekufumaneni iindlela ezintsha zokujongana neengxaki eziqhubekayo kunye imingeni emitsha.
· Thathani isigqibo malunga nendlela oza kubanika ngayo izixhobo ezixabisekileyo. Akukho luluntu okanye ilizwe elinemithombo engenamkhawulo. Yenza uphando kuqala ukuze uqinisekise ukuba ulwabiwo lwezibonelelo zakho luyavakala kwixesha elifutshane nakwixesha elide. Ekuphuhliseni ulwabiwo lwezibonelelo, qalisa ukucinga ngaphandle kwebhokisi. Ngokomzekelo, ngaba kukho ubudlelwane phakathi kokhuseleko kunye nophawu lwemveliso kwisithuba se-9-11 yehlabathi? Ngaba intengiso ye-classical inengqiqo kwi-demographic yakho okanye i-niche market? Okokugqibela ungalibali ukuba kusoloko kukho ixesha elibambekayo kukhenketho. Oko kuthetha ukuba ngeli xesha le-post-Covid kuya kufuneka ukuba siyile kakhulu. Ngokwesiko, amaxesha okuphumelela abonisa umsebenzi olungileyo ukusuka kwiminyaka emininzi edlulileyo. Ngendlela efanayo, ukugudla unxweme kunokwakha kusenokubangela iingxaki ezinkulu kwiminyaka embalwa.
· Yenza ngokufanelekileyo, kwaye ungaze ulibale ukuncuma! Zama ukufumanisa ukuba umgaqo-nkqubo unokuvelisa njani ngaphezu kwesinye iziphumo ezilungileyo. Akufunekanga ukuba silungele ukurisayikilisha iimveliso ezindala kuphela, kodwa ubuchule bokuyila busenokuthetha ukusetjenziswa kwakhona kwamaphulo okuthengisa angaphambili, imigaqo-nkqubo yangaphambili okanye nokurisayikilisha indlela esisebenzisa ngayo umhlaba. Khumbula ukuba amaxesha ayatshintsha kwaye umgaqo-nkqubo onokuthi ungaphumelelanga kwixesha elithile unokuba yimpumelelo kakhulu kwelinye ixesha.
· Qasha abona bantu unokuba nabo. Ishishini lezokhenketho lisekelwe ebantwini nakwizakhono zobuntu. Akukho nto inokutshabalalisa ishishini lezokhenketho ngaphezu kwabantu abasebenza kulo abangabathandi abantu. Ngelixa abasebenzi abonelisekileyo bengaqinisekisi ngenkonzo elungileyo yabathengi, abasebenzi abanomsindo phantse basoloko beqinisekisa ngenkonzo embi yabathengi. Thatha ixesha lokuphatha abantu ngentlonipho kwaye ubanike olona qeqesho lubalaseleyo, kungekuphela nje kwindawo yabo yobungcali kodwa nakwezinye iinkalo zokhenketho. Xa abasebenzi benza into engalunganga musa ukuthumela umntu obambeleyo kodwa uqeqeshe abantu abaphezulu. Khumbula ukuba nokuba abaphathi bezokhenketho abakuthandi kangakanani na ukuqeqesha abanye kukho amaxesha apho kungekho ndlela yimbi.
Ngakumbi kwiWorld Tourism Network ku www.wtn.travel
Okungakumbi kwiiTitbits zoKhenketho kunye noKhenketho kunye nokunye: itourismandmore.com